La Casona de la Esquina - I-Airbnb
I-ikhaya ephelele ibungazwe ngu-Audrey
U-Audrey Ungumbungazi ovelele
Ukukhansela kwamahhala ngaphambi komhla ka-Jan 30.
I-BEAUTIFUL COLONIAL HOUSE imemezele ifa lamasiko elitholakala edolobheni elinempilo nelivakashile laseJuayua, elizungezwe izintaba zekhofi kanye ne "Ruta de las Flores", i-La Casona de la Esquina iyindlela enhle kakhulu yokujabulela umoya opholile nomndeni nabangane. Lapho elidala lixhumene nelesimanjemanje, leli khaya elihle linamakamelo okulala ama-4, amabhavu angu-4.5, ipulani eliphansi elivulekile, i-mezzanine, amaphasishi abanzi, ikhishi, ingadi yangaphakathi, ithala elinombono omangalisayo wezintaba kanye nesonto lethu elimangalisayo.
I-Casona de la Esquina yakhiwa ngo-1913, ingenye yezindlu ezimbalwa eJuayúa ezisenethonya laseSpain. Isitayela sayo sezakhiwo samaKoloni sibonakala ku-façade yayo, ovulandi bayo, iminyango yasekuqaleni, amaphasishi abanzi, amakholomu okhuni kanye nophahla oluphakeme olujwayelekile kusukela ngalezo zinsuku kusagcinwe kahle.
Ngenxa yokuzamazama komhlaba okulandelanayo ngo-2001, izindonga ze-adobe ezingamamitha angu-2 zangempela, azikwazanga ukubamba ukuziphoqa ukuba zidilize, okwaholela ekubeni senze ukwakhiwa kabusha kwendlu, silandela isiqondiso esiseduze esivela e-Concultura (inhlangano ephethe ukulondolozwa kwezindawo zamagugu zamasiko) ukuze kugcinwe futhi kugcinwe indawo engaphambili nendawo yangaphakathi njengokukhona kokuqala. I-LA CASONA DE LA ESQUINA IBIZWE NGEFA LESIKO kulesi sikhungo.
Naphezu kwesitayela sesimanje esahlanganiswa ekwakhiweni, indlu isalokhu igcina ingqikithi yayo yekoloni, esiqiniseka ngayo ukuthi uzozizwa ngokushesha lapho uhamba emasangweni ayo amahle okhuni .... lapha uzophefumula e-El Salvador edlule, ngo isimo sokwamukela nokuphumula okwengeziwe.
ubusuku obungu-7 e- Juayúa
Indlu yethu itholakala phakathi nedolobha lapho usengakwazi ukwazisa imigwaqo yamatshe embalwa yokuqala leli dolobha elalinayo esikhathini esidlule, siseduze nezitolo, isitolo segrosa, izindawo zokudlela, ipaki kanye nesonto elihle le-del "Cristo Negro". Futhi 20 min. kude ne-"Chorros de la Calera" (izimpophoma)
Ngihlala eduzane, futhi ngitholakala ngocingo/ngombhalo/ nge-imeyili nganoma imiphi imibuzo
kusukela ngo-8am - 8pm.
UAudrey Ungumbungazi ovelele
Hlola ezinye izinketho ezise- Juayúa namaphethelo